इमर्जिङ नेसन्समा नेपालको लक्ष्य पुरा होला? | Hamro Khelkud
इमर्जिङ नेसन्समा नेपालको लक्ष्य पुरा होला?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटाको भनाइ मान्ने हो भने शनिबारदेखि बंगलादेशमा इमर्जिङ नेसन्स कपमा नेपालको दुई वटा उद्देश्य छन् । पहिलो लक्ष्य दोस्रो चरण सम्म पुग्ने र अर्को भविष्यका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको ‘ब्याक अप’ तयार पार्ने । पहिलो लक्ष्य पुरा गर्न असम्भव नभएपछि चुनौतिपूर्ण पक्कै छ । कारण नेपालले समूहमा टेस्ट मान्यता प्राप्त दुई राष्ट्र पाकिस्तान र बंगलादेशको यू २३ को टोलीको सामना गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै नेपालले हङकङको पनि सामना गर्नुपर्नेछ । यी तीन टोलीविरुद्ध खेलेर अघिल्लो चरणको यात्रा गर्न कठिन देखिएपनि ती खेललाई नेपालले नयाँ खेलाडीका लागि अवसरका रुपमा भने पक्कै उपयोग गर्न सक्छ । प्रतियोगिताको अर्को समुहमा भने भारत यु-२३, श्रीलंका यु-२३ संगै अफगानिस्तान र मलेसिया रहेका छन्। अर्को सम्भवतः प्रशिक्षक टमाटाको त्यहि भनाईलाई बल पुग्ने गरि तीन सिनियर खेलाडीले यो प्रतियोगितामा आराम लिएका छन् ।
पेटको शल्यक्रिया पनि पूर्ण रुपमा फिट नभएका कारण नियमित कप्तान पारस खड्काले केन्याविरुद्ध विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपका दुई खेल खेलेनन् । केन्यासँग पहिलो खेल ५ विकेटले गुमाएको नेपालले दोस्रो खेलमा त्यहि टोलीलाई ७ विकेटले हरायो । नेपाल जितेपछि पारसले आफु पूर्ण रुपमा फिट नभएकाले इमर्जिङ नेसन्स कप नखेल्ने खुलासा गरे । त्यसको केही दिनमै टोलीका नियमित सदस्यमध्येका शक्ति गौचन, वसन्त रेग्मी र सामपाल कामीलाई आराम दिइएको छ ।
यी चार खेलाडीको सट्टा टोलीमा मौका पाउने जुन कुनै खेलाडीलाई पनि भविष्यको टोली खम्बाका रुपमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि उनीहरुले बंगलादेशमा पाउने अवसरलाई कति सदुपयोग गर्न सक्छन् , त्यो भने हेर्न बाँकी छ । बंगलादेश भ्रमणका लागि सिनियर चारको सट्टा आसिफ शेख, सुसन भारि, दिपेश श्रेष्ठ र भुवन कार्कीलाई टोलीमा समेटिएको छ । यी मध्ये भुवन बाहेक तीनै जनाले ‘डेब्यू’ गर्न बाँकी छ । केन्यासँगको खेलमा टोलीमा रहेपनि दीलिप नाथले पनि डेब्यूको मौका सम्भवत यहि भ्रमणमा पाउन सक्छन्
यी माथिका पाँच बाहेक सुनिल धमाला, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र आरिफ शेख पनि टोलीका नयाँ सदस्य नै हुन् । भुवनले दुई बर्ष अघि केन्याविरुद्ध डेब्यू गरेका थिए । त्यसयता उनले मौका पाएका छैनन् । त्यस्तै सुनिल, दिपेन्द्र र आरिफले समान ५० ओभरको २ खेलेका छन् । टोलीमा रहेका अर्का युवा सिमर अभिनाषले भने ५० ओभरका २ र २ वटा टि ट्वान्टी खेलेका छन् । यीनै युवा खेलाडीलाई नेपाली टोलीको भविष्यका स्टारका रुपमा हेरिएको छ । कलिलै उमेरमा गत बर्ष डेब्यू गरेका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आफुलाई नेपाली टोलीको भर गर्न सक्ने खेलाडीका रुपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
युवा खेलाडीले आफुलाई प्रमाणित गर्ने यो एउटा राम्रो अवसर हो । यस्तै अवसर फेरी पाउन निकै समय कुर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपका चार खेल अझै बाँकी रहेको अवस्थामा युवा खेलाडीले नियमित रुपमा टोलीको सदस्य बन्नका लागि इमर्जिङ नेसन्स कपको प्रदर्शन अर्थपूर्ण हुनेछ । घरेलु प्रतियोगितामा प्रतिभा देखाइसकेका युवा खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको खाचोको आवश्यकता थियो । जुन इमिर्जिङ नेसन्स कपले पुरा गर्न सक्दछ ।
नयाँ र पुराना खेलाडीको समिश्रणमा तयार हुने टोलीमा कसले मौका पाउछन्, त्यो भने कौतुहलताको विषय रहनेछ । पाकिस्तानविरुद्ध सोमबार हुने खेलमा मौका पाउने युवा खेलाडीले कस्तो प्रदर्शन गर्नेछन्, त्यो भने समर्थकका लागि चासोको विषय हुनेछ ।
ज्ञानेन्द्र मल्ल (कप्तान),शरद भेषावकर (उपकप्तान),विनोद भण्डारी, सागर पुन , मेहबुब अलाम , दिपेन्द्र सिंह ऐरी , सुनिल धमला , सन्दिप लामिछाने, आरिफ शेख, अभिनाश कर्ण, दिलीप नाथ, आसिफ शेख, सुसन भारि, दिपेश श्रेष्ठ र भुवन कार्की